Beelaha Abgaal iyo Xawadle oo isku heesata xilka Madaxweynaha Hirshabelle | Wardoon
Home Somali News Beelaha Abgaal iyo Xawadle oo isku heesata xilka Madaxweynaha Hirshabelle
Beelaha Abgaal iyo Xawadle oo isku heesata xilka Madaxweynaha Hirshabelle
Xaalad siyaasadeed oo qatar galin kara dhismaha maamul goboleedka Hirshabelle ayaa xiligan soo afbaxaya, waxaana khilaaf xoogan ka taagan yahay cida qaadaneysa xilka Madaxweynaha maamulkaasi.
Maamulka Hirshabelle ayaa lagu dhisay markiisi hore qaab deg degsiimo ah, waxaana Hirshabelle la dhisay xili kala guur ah oo doorasho loo deg degayay, waxaana mar kale dhismaha maamulkaasi kusoo aaday xili kale oo kala guur ah doorasho la isku diyaarinayo.
Hirshabelle oo ka kooban labada gobolka ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe ayaa markii hore loo qeybsaday in Hiiraan la siiyo Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka halka Shabeelaha Dhaxe la siiyay Madaxweyne kuxigeenka iyo Caasimada.
Waxaa hada socda qorshe ka badelan kii hore, waxaana beesha Abgaal oo degta Shabeelaha Dhaxe markan doonayaan in ay qaataan xilka Madaxweynaha halka beesha Xawaadle oo Hiiraan degto iyana dooneyso in xilkaasi aan lagula tartamin siina heestaan.
Dhismaha Maamulka Hirshabelle ayaana hada wajahaya khilaaf xoogan oo salka ku haya awood qeybsiga, Siyaasiyiinta Beesha Xawaadle ayaana diidan in xilka Madaxweynaha Hirshabelle noqdo mid furan oo loowada tartami karo.
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa dhawaan sheegay in beesha Xawaadle aan laga bedeli karin xilka Madaxweynaha Hirshabelle, waxa uuna ka digay in bur bur loo horseedo Hirshabelle.
”Adeer waxaan waa lagu heshiiyay mana laga laaban karo, waan ogolaan karnaa hadii Puntland oo Madaxweyne ka noqdo nin Dhulbahante ah , ama Galmudug oo Nin Mareexaan Madaxweyne ka noqdo Habar Gidirna Madaxweyne kuxigeen ka noqoto” ayuu yiri Cali Cosoble.
Dowlada Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeenayaa in iyadu ka dambeyso khalaalasahan soo wajahay dib u dhiska maamulka Hirshabelle, waxaana la sheegay in Villa Soomaaliya dooneyso in Madaxweyne ka noqdo Hirshabelle Cali Guudlaawe.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa shalay kasoo horjeestay jadwal ay soo saareen guddiga qaban qaabada soo xulista Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle , waxaana suurto gal ah in Waare uu guddigaasi kala diro.
Doorashada Hirshabelle ayaa kusoo aaday xili la isku diyaarinayo doorashada heer federaal, waxaana laga cabsi qabaa in mar kale Hirshabelle loo sameeyo maamul qaab boobsiis ah ku yimid oo aysan raali kawada aheyn dadka dega Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe.
Previous articleDAAWO:-Musuq maasuq ayaan kunimid kursiga
Next articleDAAWO-Somaliland oo digniin cuslus u dirtay siyaasiyiinta Dhulbahante
Dagaal dhax maray Ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna
Beelihii kudagaalamay degaano ka tirsan Mudug oo heshiis hordhac ah gaaray...